> Resource> Jailbreak> Olee otú Iji Jailbreak iPhone 5c
Ya mere ị kpebiri jailbreak gị iPhone 5c ma ị na-amaghị otú. A nkuzi bụ maka gị. Thru isiokwu a, m ga-akọwa nzọụkwụ site nzọụkwụ otú jailbreak ihe iPhone 5c. M na-aga na-eji evasi0n 7 erigbu jailbreak. N'oge, ọ bụ nanị software nke bụ ike nke na jailbreaking ọ bụla Apple ngwaọrụ-agba ọsọ na iOS 7.
Ị nwere ike ịlele nke version nke iOS gị iPhone na-agba ọsọ site na ịga na Ntọala> Ozuruọnụ> banyere na gbadaa na version. Ma ọ bụrụ na i nwere otu iPhone 5c, ị na-agba iOS 7 ma ọ bụ n'elu.
Tupu m na-amalite na-akọwa usoro nke jailbreaking, ị ga na a ga ndabere gị iPhone 5c. Ọ dị mkpa na ị na-eme otú ahụ, n'ihi na ọ bụrụ ihe ọ bụla na-aga na-ezighị ezi n'oge evasi0n 7 jailbreaking usoro, ị nwere ike mgbe niile weghachi gị iPhone 5c ma na-azụ niile data (kọntaktị, SMS, photos ...) na ha nọ na ngwaọrụ gị. E nwere 2 ụzọ ndabere gị iPhone 5c, onye mbụ bụ ime ya ozugbo gị iPhone site na ịme ọpịpị na Ntọala> iCloud> Nchekwa & nkwado ndabere na mpaghara enweta na "Back Up ugbu a." The Nke abụọ ụzọ bụ site na iji iTunes na kọmputa gị, jikọọ iPhone 5c gị na kọmputa, na-emeghe iTunes, pịa na iPhone button, na ibe nchịkọta, pịa "ndabere ugbu a."
Ugbu a na ihe niile dị njikere, ka na-awụlikwa elu na isi nke isiokwu. Lee ndị dị iche iche nke evasi0n 7 usoro na ọ bụ ezie na m ga-eji na Mac version nke software dị ka ihe atụ, windows version bụ otu ihe.
Nzọụkwụ 1: Wepụ passcode si gị iPhone 5c ma ọ bụrụ na e nwere otu
Nzọụkwụ 4: Jikọọ iPhone 5c gị Mac
Nzọụkwụ 6: Ị kpọghee ekwt gị iPhone 5c na pịa na evasi0n 7 ngwa
Biko gbanyụọ passcode na gị iPhone 5c bụrụ na i nwere otu. Iji mee otú ahụ, Site na Ihuenyo na gị iPhone 5c, enweta na Ntọala General passcode Mkpọchi On Tụgharịa passcode Off
Jikọọ gị iPhone 5c gị mac na eriri / ọkụ USB na e nyere na ekwentị.
Evasi0n 7 ga-chọpụta gị iPhone 5c na ga-ekwu banyere ndị iOS femụwe version na-agba ọsọ. Pịa na jailbreak bọtịnụ iji malite usoro.
Ozugbo usoro zuru ezu, ị ga-enweta a ozi na-agwa gị Ị kpọghee ekwt gị iPhone. Biko Ị kpọghee ekwt gị iPhone 5c na pịa na evasi0n 7 ngwa. Ọzọkwa, adịghị mechie evasi0n 7 software na kọmputa gị, dị ka Jailbreaking usoro bụ ma rụchaa.
The iPhone ihuenyo ga-aga nwa na mgbe ahụ, ọ ga-reboot site n'onwe ya, atụla-echegbu onwe dị ka nke a nkịtị. Ozugbo iPhone nwere reboot, ị ga-ahụ cydia ngwa na ekwentị gị, ọma jailbroken gị iPhone 5c.
Iji Mbido Cydia, dị nnọọ pịa na ngwa ozugbo na ọ ga-akpaghị aka initialize onwe ya. Na mbụ igba egbe, ngwa ga-reboot gị iPhone 5c mgbe mwube elu. Mgbe ịgbanyụ, dị nnọọ enweta ọzọ na cydia ngwa ibudata oké ngwa ọdịnala na ị gaghị na-ahụ Apple ngwa ahịa.